ပေ Box ကို | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-bestbusinessprinting.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ပေ Box ကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ကုန်ပစ္စည်းသဘောသဘာဝ:polyethylene terephthalate ပေါင်းစပ်သေတ္တာ
စက္ကူ:polyethylene terephthalate ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတပစ္စည်း
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခိုင်မာခြင်းနှင့်အတူ thermoplastic polyester အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်,ဆန့,သက်ရောက်မှုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ,ပွန်းပဲ့ခုခံခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်လျှပ်ကာ.အဆိုပါပွင့်လင်းပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုး box ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင့်ထုတ်ကုန် features တွေပြသနိုင်ဖို့စက္ကူထုပ်ပိုးနေတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး-ဖြတ်လမ်း.ထုတ်လုပ်မှုအတွက်,ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှိပါတယ်,ပိုကောင်းတဲ့:ခြစ်ရာခုခံ,ပွင့်လင်းမြင်သာမှု,တောင့်တင်းဒီဂရီ.
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း,ကဆိုဒါတစ်ဘုံကွန်တိန်နာဖြစ်လာသည်,သစ်သီးရည်,ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာ,စားသုံးဆီရေနံလက်လီထုပ်ပိုး,စသည်တို့ကို.ယင်း၏ကောင်းသောခိုင်မာခြင်းကြောင့်,အလင်းအလေးချိန်,လုံ,အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခုခံ,ရေခုခံနှင့်ရေနံခုခံ.အဆိုပါကျုံ့မှုနှုန်း 70 ဖြစ်ပါတယ်%ထိုသို့အပူခံနိုင်ရည်မဟုတ်ပါဘူး.ဒါဟာ 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံပျက်သောအခမဲ့ထားရှိမည်နိုင်ပါသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestbusinessprinting.com/my/pet-box.html
ပေ Box ကို ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေ Box ကို ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 5,329 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestbusinessprinting.com